အနာဂါတ်က ဆယ်တန်းအထက်မှာလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အနာဂါတ်က ဆယ်တန်းအထက်မှာလား?
Posted by Yan Shin on Jun 23, 2011 in Creative Writing, Think Different |4comments
မဝေရဲ့ “၁၀ တန်းအောင်ပြီးနောက် ဘယ်ဘာသာယူရင် ကောင်းမလဲ” ဆိုတာလေးဖတ်ပြီးတော့ Comment ရေးရင်း ရှည်နေတာနဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို Post တစ်ခုရေးလိုက်တာပါ။
(eg. တိကုဘွဲ့ရ စာဟောဆရာ( တိန်)၊ ဆရာဝန် ကျူရှင်ဆရာ)
သေခြာတာတစ်ခုကတော့ ဆေးတက္ကသိုလ် စက်မှု့(နည်းပညာ)တက္ကသိုလ်တွေက ထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာ ရှိမနေတော့တာပါပဲ။ ဒါဟာ ရွေးချယ်တတ်မှု ရွေးချယ်နိုင်မှု ရွေးချယ်လိုမှု ရွေလျားခြင်းတစ်လား……
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို လျှောက်လာသူတွေထဲက လက်ခံနိုင်မဲ့ အရေအတွက်ကို အပေါ်ဆုံးက လူတွေကိုပဲ ဖြတ်ယူမဲ့အစား
ကိုလျှောက်မဲ့ တက်လိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုလျှောက်ရာမှာ အမှတ်ပေါင်းကလဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်သလို တက်ရမဲ့သူတွေကို ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခိုင်းဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဆိုရာမှာ အဲဒီမိမိတက်လိုသော ဘာသာရပ်အပေါ်မှာ လျှောက်ထားသူဟာ ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားမှု့ရှိသလဲ ဘယ်လောက်လိုလားမှု့ရှိသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်မဲ့မေးခွန်းမျိုးလေးတွေဖြေဆိုပြီးမှ အဲဒီဘာသာရပ်အပေါ်မှာ အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားမှု့ရှိမယ်လို့ယူဆသူများကိုမှ ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်…
It should be like that long ago.
I was also follow by my parents wish.
But, now I do what I want to be.
I regret only the time I spent for what I don’t want to.
Now I trying the best what I want to and forget the past.
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အနာဂတ်တည်ဆောက်မယ့်သူပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာ၊ လိုချင်တဲ့ဘ၀ကို မလျှော့သော ဇွဲ၊လုံ့လ၊၀ီရိယတို့နဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်လျှောက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲတွေ ထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ ..
တို့အချိန်တုန်းက ဆယ်တန်းလဲ အောင်ရော .. ဒေသကောလိပ်ဆိုတာကြီး ပေါ်လာတယ် ..
ဒေသကောလိပ်မှာ ၂ နှစ်တောင် ကြာသွားတယ် .. နောက်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် ဆိုတဲ့ စာမေးပွဲ ထပ် စစ်ပါလေရော .. တက္ကသိုလ်ရောက်ဖို့ စာမေးပွဲ (၄)ခါ ဖြေခဲ့ရတယ် .. တက္ကသိုလ် ရိုးရိုးဘာသာတွဲ ယူတဲ့လူအတွက်တော့ (၁) ကြိမ်ပဲ ပို ဖြေရပေမယ့် ဆေးကျောင်း တက်ရတဲ့လူအတွက် (၂) ကြိမ် ပိုဖြေခဲ့ရတယ် .. ရိုးရိုးဘာသာတွဲက တတိယနှစ်မှာ စ တက်ရတယ် .. ဆေးကျောင်းက ဒုတိယနှစ်မှာ စတက်ရတယ် ..
ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ရဖို့အတွက် ကလေးတွေကို စာမေးပွဲတွေနဲ့ ထပ် မနှိပ်စက်လိုက်ပါနဲ့ ..
အခုခေတ် ကလေးတွေဟာ ကျောင်းက လပတ်စစ်တာတွေ .. ကျူရှင်က အပတ်စဉ် စစ်တာတွေ နဲ့ စာမေးပွဲ သံသရာထဲမှာ မျောနေရတဲ့ကြားထဲ ထပ်ပြီး စစ်ရင် စာတတ်ဖို့ သင်ခဲ့ရတာ မဟုတ်ပဲ .. စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ စာသင်နေရတာ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဆိုတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တွေးရင် ရယ်ချင်စရာကြီးပါ… ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်…
( စာမေးပွဲရမှတ် + ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအမှတ် = ၀င်ခွင့်(လိုချင်သောတက္ကသိုလ်) )
ဒါပေမယ့် မရိုးသားမှုတွေ မရှိရအောင် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စစ်ဆေးပေးနိုင်မှ ကောင်းမယ်ဗျာ….
ပညာရေးဆိုတာလဲ အမြဲတမ်း update လုပ်နေရင် တည်ငြိမ်မှု မရှိနိုင်သလို၊ ရှေးရိုးစွဲမူတွေကို ဖက်တွယ်နေရင်လဲ နောက်ကျကျန်ခဲ့ဖို့များပါတယ်…